बधाई ! 'प्लेयर अफ द वीक' मा किरणलाई आएको भोटिङ देखेर एएफसी नै चकित | TajaKhabarTV
त्रिकोणात्मक सिरिज ! नेपाल र नेदरल्याण फाईनलमा, मलेसिया रित्तो हात घर फर्कियो
बधाई ! ‘प्लेयर अफ द वीक’ मा किरणलाई आएको भोटिङ देखेर एएफसी नै चकित
२०७७, २३ चैत्र सोमबार १३:१७ April 5, 2021 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं : नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ एसियाकै साताको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। एएफसीले अप्रिल १ मा सार्वजनिक गरेको मार्च अन्तिम साताका उत्कृष्ट खेलाडीहरुमध्ये सर्वाधिक मत प्राप्त गरी किरण ‘एएफसी प्लेयर अफ द वीक’ बनेका हुन्।
राष्ट्रिय टोलीबाट गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट १० छनोट गरी एएफसीले सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले गत साता बंगलादेशलाई पराजित गरी ३७ वर्षपछि घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रफीका रुपमा थ्री नेशन्स कपको उपाधि उचालेको थियो। किर्गिस्तान यू–२३ टोलीसमेत सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल अपराजितरह्यो भने किरणले १ गोलमात्र खाएका थिए।
नेपालले किर्गिस्तान र बंगलादेशसँगको समूह चरणको खेलमा गोलरहित बराबरी खलेको थियो भने फाइनलमा बंगलादेशलाई २–१ ले पराजित गरेको थियो। हेर्नुहोस् १० स्थानसम्म को–को चुनिए?
ओल्ड ट्राफोर्डमा सम्पन्न खेलमा घरेलु टोली युनाइटेडले ब्राइटोनमाथि २–१ गोल अन्तरले जित निकालेको हो ।
खेलको १३ औं मिनेटमा डेन्नी वेलबेकले गोल गर्दा पहिलो हाफमा ब्राइटोन एक गोलले अघि रहेको थियो भने दोस्रो हाफमा घरेलु टोलीका मार्कस रासफोर्डले खेल बराबरीमा ल्याए ।
उनले खेलको ६२ औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजको पासमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका हुन् । त्यस्तै म्यासन ग्रिनउडले ८३ औं मिनेटमा गोल थपे । पउल पोग्बाको पासमा उनले गरेको गोल युनाइटेडको जितमा निर्णायक बन्यो । जितसँगै युनाइटेड अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायम छ ।
युनाइटेडले ३० खेलबाट ६० अंक जोडेको छ । शीर्षस्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटी युनाइटेड भन्दा १४ अंकले अगाडि छ । ३१ खेल खेलेको सिटीको ७४ अंक छ । त्यस्तै पराजयसँगै ३० खेल खेलेको ब्राइटोन ३२ अंकसहित १६ औं स्थानमा छ ।